PHOTOSHOP မှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အရိပ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - PHOTOSHOP ကို - 2019
အဲဒီမှာ CD မှ windose ကို install လုပ်ဖို့နီးပါးမျှအစားထိုးခဲ့ပေမယ့်ယခု ပို. ခေတ်မီနည်းပညာ၏နိဒါန်းနှင့်အတူတစ်ဦးကို USB drive ကနေ operating system ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ မပြုမီခဲ့လျှင် တစ်ဦးကို USB-drive ကိုအတူကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Windows7ကိုဝတ်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ကြပါစို့။
Windows ကို Install လုပ်နည်း
7 disc ကို windose Installing
algorithm OS ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
by နဲ့ကြီးမားတဲ့ကို USB drive ကို algorithm ကိုကနေ Windows7ကို install လုပ် CD-ROM ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တပ်ဆင်၏ပိုပြီးရိုးရာနည်းလမ်းကနေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူး။ အဓိကခြားနားချက် BIOS ကိုစိတ်ကြိုက်တည်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ပြောမလိုလားအပ်သော, သင်လက်ပေါ်နှင့်အတူ Pre-ပြင်ဆင် bootable USB မှတ်-drive ကိုကပေါ်မှာဤလည်ပတ်မှုစနစ်၏ဖြန့်ဝေထားရှိသင့်ပါသည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်တစ်ဦးက desktop PC ဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုမှကို USB drive ကနေ windose7ကို install ဖို့ဘယ်လိုမှာခြေလှမ်းကြည့်ခြင်းဖြင့် step ။
သင်ခန်းစာကို:7UltraISO windose တစ် bootable USB drive ကို Creating
အဆင့် 1: Setting parameters တွေကိုသို့မဟုတ် BIOS ကို UEFI
သင်တစ်ဦးကို USB drive ကနေ boot မှကွန်ပျူတာ start အခါဒါ operating system ကို install လုပ်ဖို့ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်, သင် UEFI သို့မဟုတ် BIOS ကိုပြုပြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ BIOS ကို - အစောပိုင်း system ကိုဆော့ဖ်ဝဲအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုဖော်ပြချက်နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။
သတိပေးခြင်း! BIOS ကို၏ဗားရှင်းအဟောင်းတစ် positioning ကို device ကိုအဖြစ်မှတ်ဉာဏ်ချောင်းကိုထောကျပံ့ပေးပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Windows7ကိုက c ကို USB-လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုတပ်ဆင်ရန်, သင်သည်ဤအမှု၌အစဉ်မပြတ်ရည်မှန်းချက်ကိုအပြစ်လွတ်မထားဘူးသော Motherboard ကအစားထိုးသို့မဟုတ် Re-flash ကိုရန်လိုအပ်သည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်, BIOS သို့သွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ login ချက်ချင်းကွန်ပျူတာတစ်ဘီးပ်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါအခါကို PC ပေါ်မှာလှည့်ပြီးနောက်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ ဤအချိန်တွင်သင် screen ပေါ်မှာပြသပါလိမ့်မည်သည့်ကီးဘုတ်၏သော့တဦးကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အများစုကတော့က F10, del သို့မဟုတ် F2ဒါပေမယ့်တခြားရွေးချယ်စရာ, BIOS အချို့မူကွဲများတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။
, BIOS interface ကိုသက်ဝင်ပြီးနောက်သင် Boot တက် device ကိုသတ်မှတ်ခြင်းအပိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အများစုမှာမကြာခဏဤအပိုင်းကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် "Boot ကို" သို့မဟုတ်အခြား၎င်း၏အမည်ကိုအတွက်စကားလုံးလည်းမရှိ။ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများ၏ဗားရှင်းမှာ, လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ် "အဆင့်မြင့် BIOS ကိုအင်္ဂါရပ်များ"။ အဆိုပါအကူးအပြောင်းအတွက်ကီးဘုတ်နဲ့ခလုတ်များ၏ထိတွေ့မှုအပေါ်မြှားသော့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည် ဝင်ရောက် လိုချင်သော tab ကိုသို့မဟုတ်ကို item အခါ။
သင်ပထမဦးဆုံး Boot တက် device တစ်ခု-မောင်းကို USB assign ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာအပိုင်းဖွင့်ဖို့အကူးအပြောင်းပြီးနောက်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို, BIOS ၏တိကျသောဗားရှင်းအပေါ်မူတည်ပြီးအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အနှစ်သာရက USB device ကိုဖော်ပြရန်စာရင်းထဲမှာ Boot တက်နိုင်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးအရာအရပ်သို့ရွှေ့ဖို့သေချာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်မှု, BIOS ထဲမှထွက်သွားရန်နှင့်ဝင်ကြ၏ parameters တွေကိုခလုတ်ကိုနှိပ်ကယ်ဖို့လုပ်ပြီးတာနဲ့ F10။ သင်ပေးတဲ့ dialog box ကိုအပေါ်အောင်မြင်သောကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် "Save"ပြီးတော့ 'Exit ကို'.
အခုတော့ BIOS ကို USB-drive ကိုအတူကွန်ပျူတာ boot မှမှန်ကန်စွာကို set up ဖြစ်ပါတယ်။ UEFI - Next ကို, သင် BIOS ကိုတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ညီမျှအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက setting ကိုအောင်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။ သငျသညျစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတစ်ဦး drive ကို install လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ဦးကို USB drive ကနေ install လုပ် settings ကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ parameters တွေကိုအဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှု, မလိုအပ်ပါသည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာကို USB-connector ကို desktop ပေါ်မှာ PC ဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုရန် bootable USB flash drive ကိုထည့်သွင်း။ သင်ကွန်ပျူတာလိမ့်မည်ချက်ချင်း UEFI interface ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ။ ထိုအခါသင် button ကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ် "အဆင့်မြင့်"အဆိုပါမျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ဆုံး, ဒါမှမဟုတ်စာနယ်ဇင်းမှာဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည် F7 ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, သင် tab ကိုသှားဖို့လိုအပျ "Loading"။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအပေါငျးတို့သစစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း parameter များ၏ရှေ့မှောက်၌တည်ရှိသောတစ်ဦးကို item ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "ကို USB ပံ့ပိုးမှု"။ ပေါ်လာသော list ထဲမှာ, select လုပ်ပါ "အပြည့်အဝမိတ်ဆက်".
ထိုအခါလက်ရှိပြတင်းပေါက်၌နောက်ဆုံး parameter သည်၏အမည်ပေါ်တွင် click - "CSM".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, ထို option ကို click "ဟုအဆိုပါ CSM ၏ပစ်လွှတ်" ပေါ်လာမည့်စာရင်းထဲကရှေးခယျြ "Enabled".
ထိုနောက်မှအပိုဆောင်းဆက်တင်များ၏အရေအတွက်။ ပစ္စည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဆက်တင်များ Boot ကိုစက်ပစ္စည်း" ကာ option ကိုရှေးခယျြ "UEFI-သာလျှင်".
အခုတော့ parameter သည်၏အမည်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "သိုလှောင်မှုထဲကနေ Boot ကို" နှင့်စာရင်းထဲကရှေးခယျြ "UEFI ပထမဦးစွာနှစ်ဦးစလုံး"။ ယခင်မျက်နှာပြင်ကိုပြန်သွားဖို့, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "နောက်သို့".
ကျနော်တို့အဓိက tab ကို window တွင်ယခုကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ "Loading" အခြားပစ္စည်းကို Add - "ကို Safe Boot တက်"။ ကအဲဒီအပေါ်မှာ click လုပ်ပါ။
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, parameter သည်အတွက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "OS ကိုအမျိုးအစား" နှင့်စာရင်းထဲကတစ်ခု option ကို select လုပ်ပါ "Windows ကို UEFI Mode ကို".
အဓိကပြတင်းပေါက်အပိုင်းပြန်လာ "Loading"။ သို့သော်လည်း parameter ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုရှာပါ "Boot ကိုဦးစားပေး"။ ပစ္စည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Parameter ကို download"။ စာရင်းထဲက, ထိုချိတ်ဆက် bootable USB မှတ်-drive ကို၏အမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။
settings ကိုကယ်တင်နှင့်ခလုတ်ပေါ်တွင် UEFI ကလစ်နှိပ်မှထွက်ရန် F10 ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။
ဒီ UEFI မှာကို USB drive ကနေကွန်ပျူတာကို boot မှ setup ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
သင်ခန်းစာကို: UEFI နှင့်အတူ7လက်ပ်တော့ windose Installing
အဆင့် 2: တက် Set နှင့် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကို
ပြီးတာနဲ့, BIOS သို့မဟုတ် UEFI setting တွင်တစ်ဦး flash drive ကိုကနေ PC ကို Boot တက်ဘို့သတ်မှတ်ထားသောပြီ, သင်ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက်နိုငျကို USB-ချောင်းကိုအပေါ်ဖြစ်သော,7windose ။
ကွန်ပျူတာ၏အပေါက်ထဲသို့ flash drive ကို Plug (သင်မတိုင်မီပြုမိကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်), နှင့်ကနေဖိုင်တွေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်သင့် PC ကို restart ချလိုက်ပါ။ drop-down list ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း၏ installer ကို, သင်မူပြောင်းခြင်းဆက်တင်များ (ဘာသာစကား, ကီးဘုတ် layout ကို, အချိန်ပုံစံ) များအတွက်သက်ဆိုင်ရာရွေးချယ်ပါ။ လိုအပ်သောဒေတာများကိုစာနယ်ဇင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက် "Next ကို".
ကလစ်နှိပ်, လာမယ့် window ကိုမှဖွင့် "Install".
လိုင်စင်သဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်. ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်။ checkbox ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းကို tick "Next ကို".
တပ်ဆင်ရွေးချယ်ရေး window ကိုဖွင့်လှစ်။ ဤတွင်ယင်းအပေါ်ကို item ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အပြီးအစီးတပ်ဆင်".
နောက်တစ်နေ့အဆင့် Operating System ကိုတပ်ဆင်ကြလိမ့်မည်သည့်အပေါ် partition ကိုသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးပါသောအခွအေနေ: volume ကိုလုံးဝအချည်းနှီးဖြစ်ရပါမည်။ သငျသညျသေချာမသိကြလျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာအမည်နှင့်စာနယ်ဇင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ် "Next ကို"အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတူချက်ချင်းစတင်နေသည်။
သင် disc ကိုအချည်းနှီးမဟုတ်ကြောင်းသိလျှင်, သင် operating system ကို reinstall ချင်သို့မဟုတ်ပဲသေချာမသိကြသင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပုံစံကိုလုပ်ဖို့လိုအပျထားတဲ့အမှု၌, ဒေတာသိမ်းဆည်းထားလျှင်။ အဆိုပါ hard drive ကိုဤအပိုင်းကိုအချို့သောအရေးကြီးသောဒေတာများသိမ်းဆည်းထားလျှင်, သူတို့သည်အခြားသောအရပ်မှပြောင်းရွှေ့ဖို့မလိုအပ်ရပါမည်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုမီဒီယာများ၏ volume ထဲမှာသိုလှောင်ထားစဉ်ကတည်းက, ဖကျြဆီးခံရပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသွားစေရန်, တစ်ဦးကို item နှင့်စာနယ်ဇင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြ "Disc Setup ကို".
သင်ခန်းစာကို: hard disk ကို partition ကိုကို C ဖောမတ်ချ7windose
တဖန်, တူညီတဲ့အပိုင်း၏နာမတော်ကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အသစ်သောပြတင်းပေါက်၌, အပေါ်ကို item ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Format ကို".
ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပေးတဲ့ dialog box ကိုအတွက် Next ကို "အိုကေ" သင့်ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတည်ပြု, ရွေးချယ်ထားသောအပိုင်းကနေအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုပျက်စီးအပါအဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းခြင်းဖြင့်အစပျိုးအကျိုးဆက်များ၏အသိအမြင်၏တကယ်တော့ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ပုံစံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်။ မူလတန်း OS ကိုတပ်ဆင်ခြင်း settings ကိုပြတင်းပေါက်အတွက်၎င်း၏ပြီးစီးပြီးနောက်ထပ်တူညီ partition ကို (ပြီးသားကို format) ကို select နှင့်စာနယ်ဇင်း "Next ကို".
ဖြစ်စဉ်ကိုကွန်ပျူတာ၏ဟာ့ဒ်ဝဲဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. အချို့အချိန်ယူသော operating system တပ်ဆင်ခြင်း, စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆင့်ဆင့်နှင့်၎င်း၏ကျမ်းပိုဒ်၏ဒိုင်းနမစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေး, သင် Installer ဝင်းဒိုးထဲမှာရှိရနိုင်သည်။
အဆင့် 3: ကနဦး setting ကိုစနစ်က
အဆိုပါ OS ကိုစနစ်တပ်ဆင်နေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အလုပ်လုပ်နိုင်, သငျသညျ၎င်းငျး၏မူလတန်း setting ကိုအပေါ်အချို့သောအရေးယူမှုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦး user name နဲ့ကွန်ပျူတာ name ကိုရိုက်ထည့်ရပါမယ်ရှိရာထိုခဏခြင်းတွင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုမတရားဖမ်းဆီးထားကြပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပထမ option လျှင်, သင် Cyrillic အပါအဝင်မည်သည့်အက္ခရာနံပါတ်ပါတဲ့ဇာတ်ကောင်, ကိုသုံးနိုင်သည်, ထို PC ကို၏အမည်ကိုလက်တင်နဲ့ကိန်းဂဏန်းများကိုသာခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာကလစ်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် "Next ကို".
လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်သင်ကစကားဝှက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုပေမည်။ တူညီသောကုဒ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများအောင်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုနယ်ပယ်များတွင်, ဒီလိုလုပ်ဖို့။ နိမ့်ဆုံးလယ်ကွင်းစကားဝှက်ကိုမေ့လျော့နေသည်အမှု၌, တစ်ဦးအရိပ်အမြွက်ဝင်ကြ၏။ ဒီဒေတာကိုဝင်ရောက်ပြီးနောက်, ဒါမှမဟုတ်ကွက်လပ်အားလုံးလယ်ကွင်းစွန့်ခွာ (စကားဝှက်ကိုမလိုအပ်လျှင်), သတင်းစာ "Next ကို".
ထို့နောက်လိုင်စင် key ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာ Windows ကိုဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူ box ထဲမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျကိုအင်တာနက်မှတစ်ဆင့် operating system ကိုဝယ်ယူလျှင်, key ကိုဝယ်ယူအတည်ပြုပေးရန်အတွက် Microsoft ကနေမက်ဆေ့ခ်ျကို e-mail ဖြင့်ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ လယ်ပြင်၌ကုဒ်စကားရပ်ကိုထည့် checkbox ကိုစစ်ဆေး click နှိပ်ပြီး "Next ကို".
တစ်ဦးက window ကို mounting ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရွေးချယ်မှုနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ အများစုမှာအသုံးပြုသူများသည်အသင့်လျော် option ကို "ကိုအသုံးပြုခြင်း settings ကိုအကြံပြု"ကအများဆုံးစွယ်စုံဖြစ်သကဲ့သို့။
လာမယ့် window ထဲတွင်, တူညီတဲ့ကစံ Windows7ကိုအင်တာဖေ့စပြုနေသည်အဖြစ်လမ်းနှင့်စာနယ်ဇင်းများတွင်အချိန်နှင့်ရက်စွဲကိုလက်ရှိအချိန်ဇုန်ကိုသတ်မှတ် "Next ကို".
ထို့နောက်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်ထည့်သွင်းကွန်ယက်ကိုကဒ်ကားမောင်းသူအစီအစဉ်၏ထောက်လှမ်းအပေါ်သို့ကွန်ယက်ကို configure ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။ သင်ကကွန်နက်ရှင်ရွေးချယ်စရာတွေထဲကရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းလုပ်ကစံ OS ကို interface ကိုမှတဆင့်ပြုကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကိုထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်အဘို့ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုပါကရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
Windows7ဒီ Pre-setting ကိုပြီးစီးခဲ့နှင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ပြီးနောက် "Desktop ကို" ဒီ operating system ကို။ ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့အလုပ်လုပ်အရှိဆုံးအဆင်ပြေစေရန်အလို့ငှာ, သင်ဆဲလိုအပ်သောဒရိုင်ဘာနှင့် software ကို install ပိုချော tuning OS ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရှိသည်။
သင်ခန်းစာကို: အ PC အတွက်လိုအပ်တဲ့ Driver ကိုစူးစမ်း
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ကို USB-drive ကိုအတူ windose7setting တဲ့အခါ boot disk ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တပ်ဆင်ထံမှအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူး။ အဓိကခြားနားချက်စနစ်ဆော့ဝဲ (BIOS ကိုသို့မဟုတ် UEFI) ၏ကြိုတင်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုမုသာနှင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို CD ROM ကိုတဆင့်ဖြန့်ဖြူးမပေးနှင့်အတူချိတ်ဆက်လျက်, ကို USB-connector ကိုမှတဆင့်ကြောင်း။ ကျန်ရှိနေသေးသောခြေလှမ်းများနီးပါးတူညီကြသည်။